५ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घर सफा गर्नु भनेको तपाईंको आफ्नै शरीर हो।-(मारिना अब्रामोविक) - Sajha Entertainment
Home/मनोरञ्जन/५ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घर सफा गर्नु भनेको तपाईंको आफ्नै शरीर हो।-(मारिना अब्रामोविक)
५ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घर सफा गर्नु भनेको तपाईंको आफ्नै शरीर हो।-(मारिना अब्रामोविक)
यहाँ ५ शारीरिक पार्ट्स तपाईलाई अझ सफा गर्न आवश्यक छ।
BIKRAM RANA Send an email १८ आश्विन २०७७, आईतवार १४:३६
हामी सबैलाई सरसफाइको महत्त्व थाहा छ र हामी मध्ये धेरैले सोच्छौं कि साबुनले नुहाएर हामी हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूलाई बिरामी बनाउनबाट जोगाएका छौं। धेरै दिन, तपाई सायद स्वत: पाइलटको गतिमा जानुहुन्छ। तुरुन्तै तपाईको अलार्म बिहान बज्ने बित्तिकै तपाईं ओछ्यानबाट उठ्नुहुन्छ र तपाईंको दैनिक सफाई दिनचराहरूको लागि नुहाउने ठाउँमा जानुहुन्छ। तर के तपाईं आफ्नो शरीरको प्रत्येक ईन्च सफा गर्न सचेत प्रयास गर्नुहुन्छ? यहाँ केहि शरीरका अंगहरू छन् जुन तपाईलाई स्वस्थ र हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूबाट सुरक्षित राख्नको लागि प्राय: सफा गर्नुपर्छ।
तपाईंले सायद नियमित रूपमा आफ्नो कपाल धुनुभयो, तर के तपाईंले सुन्नुभयो कि कम शैम्पू प्रयोग गर्नु तपाईंको लागि उत्तम हो? दैनिक शैम्पूले स्पष्ट रूपमा प्राकृतिक र लाभदायक तेलहरू हटाउँदछ जसले कपाललाई स्वस्थ बनाउँदछ। यहाँ रमाईलो समयको तुलना गरिएको छ: धेरै दशक पहिले, न्यू योर्क टाइम्सले महिलाहरुलाई सल्लाह दिएका थिए विशेषज्ञहरुका सिफारिसको आधारमा, हप्तामा दुई पटक कपाल धुनु उत्तम हो। जबकि धेरै व्यक्तिले आफ्नो कपाल सफा गर्न शैम्पू प्रयोग गर्दछन्, अधिकतर स्क्याल्पमा विशेष ध्यान दिदैनन्। यस क्षेत्रका धेरै पसिना ग्रंथिहरू फ्ल्याक्सहरू बन्नेछन् यदि राम्रोसँग स्क्रब गरिएको र मसाज गरिएको छैन भने। यो तपाइँको टाउकोमा खुजली छ यदि यो सफा छैन भने।आदर्श रूपमा, तपाईले दुई मिनेट तपाईको स्क्याल्प स्क्रबिंगमा खर्च गर्नुपर्दछ मृत छाला कोषहरूबाट छुटकारा पाउन जुन प्रत्येक दिनको निर्माण हुन्छ। रगत प्रवाह बढाउन मद्दत गर्न तपाईंले आफ्नो टाउकोको मसाज पनि गर्नुपर्छ जसले तपाईंको कपाललाई आवश्यक पोषकहरू प्रदान गर्दछ। तर तपाइँ कति पटक शैम्पू गर्नुपर्छ? यो तपाइँको कपाल प्रकारमा निर्भर गर्दछ, किनकि धेरै धेरै शैम्पू रसायनहरू पनि कपालको लागि खराब हुन सक्छ। यदि तपाईं तेल कपाल छ भने, तपाईं प्रत्येक अर्को दिन शैम्पू आवश्यक हुन सक्छ ।
२. पेट बटन
नाभि वा पेट बटन सायद सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको शरीरको अंश हो जब यो सफाईको लागि आउँदछ। ब्याक्टेरिया सजिलैसँग यस गाढा, ओसिलो ठाउँमा बनाउँछन्। केही व्यक्तिहरूको पेट बटन पसिनाको कारण साँच्चिकै खराब गन्ध आउन सक्छ। केहि केसहरूमा गन्धमा ब्याक्टेरिया, फl्गल वा खमीर संक्रमणको लक्षण हुन सक्छ वा पेटको बटनमा चोटपटक वा चोट लाग्न सक्छ जुन उपचार नगरिएको छ। यो तपाईको पेट बटनबाट बन्दूक सफा गर्न एकदम सरल छ। नरम वॉशक्लोथ प्रयोग गरी तपाईंको नाभीलाई हल्का रूपमा मालिस गर्नुहोस् र क्षेत्रको कीटाणुशोधन गर्न टेबल नुनको प्रयोग गर्नुहोस्। क्रीम वा अन्य छाला हेरचाह उत्पादनहरू प्रयोग नगर्नुहोस् किनभने यसले अवशेष छोड्दछ जुन अधिक निर्माणको कारण हुन सक्छ।
३.तपाईंको कान पछाडि
तपाईंको कानको पछाडि छालाको पट्टिहरू छन् जुन सेबेशियस ग्रंथिहरूको उच्च सांद्रता हो। यी ग्रन्थिहरूले पसिना बटुल्छन् र सेक्रुम सक्रेट गर्दछन, त्यसैले तपाईले यस क्षेत्रलाई सफा गरेर धुनु पर्छ। तपाईको कान पछाडि क्षेत्र पनीर जस्तै गन्ध गर्न सक्छ किनकि ब्याक्टेरियाको बृद्धिका कारण। जबकि यो सामान्य हो, तपाईंको छाला आफै नवीकरणको जैविक प्रक्रिया मार्फत जान्छ, गन्ध सुखद हुँदैन – विशेष गरी यदि अन्य मानिसहरूले पनि गन्ध लिन्छन्।कहिलेकाँही, ब्ल्याकहेडहरू पनि तपाईका कानहरूमा पछाडि हुन्छ जब यो सफा हुँदैन वा अवशेषहरू शैम्पू र साबुनहरूबाट टाढा रहन्छ। तपाईं नुहाउनु अघि, तपाईं ब्याक्टेरिया वा कीटाणु मार्न सेतो सिरकामा भिसाएको कपासको साथ यस क्षेत्रमा पनि स्वाब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं झुम्का लगाउनुहुन्छ भने, नियमित रूपमा हटाउनुहोस् र यिनीहरू पनि धुनुहोस्।
तपाईंको जिब्रो स्पंज जस्तो छ। यसले तपाईंको मुखमा राखिएको खाना र पेयबाट ब्याक्टेरियाहरू ग्रहण गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो जिब्रो सफा गर्ने बारे सचेत हुनुहुन्न भने, ब्याक्टेरियाको निर्माणको कारणले तपाईं दुर्गन्धित सास फेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा अध्ययनले भन्यो कि ha० प्रतिशत हेलिटोसिस, जसलाई सास फेर्ने दुबै पनि भनिन्छ, जिब्रोको अवशेषको कारणले हो। एक सरल उपाय? तपाईंको जिब्रो सफा गर्नुहोस् जब तपाईं दाँत माझ्नुहुन्छ। उही टूथब्रश प्रयोग गरेर, आफ्नो जिब्रोको पछाडि पुग्नुहोस् र बिस्तारको बाहिरी भाग टिपतिर स्क्र्याप गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग संवेदनशील गैग रिफ्लेक्स छ भने, टुथब्रश भन्दा जिब्रो स्क्र्यापर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। थप रूपमा, तपाइँ आफ्नो मुख सफा गरे पछि माउथवाशबाट गार्गल गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिनिकल अनुसन्धान अनुसार अन्य प्रकारको माउथवाशको तुलनामा ब्याक्टेरियाको निर्माणलाई ३४.५ प्रतिशतले घटाउन सक्ने भएकोले यसको सामग्रीहरूमा सेन्टिपायरिडिनियम क्लोराइड (सीपीसी) भएको माउथवाश छनौट गर्नुहोस्।
धेरै मानिसहरू नुहाउने क्रममा खुट्टामा सफा गर्दैनन् तर विज्ञहरू भन्छन कि तपाईको अनुहार धुँदा वा दाँत माझ्ने बेलामा यो क्षेत्र सफा हुनै पर्छ। खुट्टा र ब्याक्टेरियाको सम्पर्कमा खुट्टाको लागि यो सजिलो छ, जसले कलस र अन्य छालामा जलन निम्त्याउन सक्छ।बाथरूममा आफ्नो खुट्टा टीएलसी दिनुको अलावा, छालाको कोमलता कायम राख्न हरेक दिन लोशन वा मोइश्चराइजर लगाउनुहोस्। आफ्ना खुट्टाको औंलाहरू बीचको क्षेत्रहरूमा ध्यान दिन नबिर्सनुहोस्, साथै तपाईंको खुट्टाको कुर्कट र बल। यी ती क्षेत्रहरू हुन् जुन चाँडो र सुक्खा छालाले संक्रमण निम्त्याउन सक्छ। प्रत्येक दुई हप्तामा तपाइँको औंलाहरू ट्रिम गर्नुहोस् र फाइल गर्नुहोस्। विज्ञहरूले पनि लगाउनु भएको जुत्ता घुमाउने सल्लाह दिन्छन् किनभने उनीहरूको खुट्टा पसिनाले र बाँकी अवशेष छोड्दछ।अन्तिम विचारहरुराम्रो स्वच्छता र भलाईको कुरा को रूपमा, केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त छैन। यी प्राय: बेवास्ता गरिएका शरीरका अंगहरू सफा गर्न ध्यान दिन केहि बढी मिनेट लिनुहोस्। तपाईको तालिकामा यो सकरात्मक बानी विकास गर्न ढिला भएको छैन र तपाईलाई पछि राम्रो भार लाग्नेछ। सरसफाइ ईश्वरभक्ति पछि छ, सबै पछि!
भक्तपुरमा मिनिबसभित्र किशोरीको सामुहिक बलात्कार, दुई पक्राउ !!!
८ चैत्र २०७७, आईतवार ११:३५